Na-eto Eto Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na 👩‍🌾👨‍🌾lọ - Ne gerekir?
Too Mkpụrụ osisi Oge Osisi na Akwụkwọ nri n'oge 👩‍🌾👨‍🌾
Kedu ka m ga-esi wee too mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na mbara ihu m n'oge ọkọchị? Na-eto akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi n'ụlọ
Na oria ojoo coronavirus, anyi niile na ekewapu onwe anyi na ulo anyi. Anyị na-ajụ ajụjụ a, olee otu anyị nwere ike isi rụpụta ngwaahịa anyị na-azụ site na mpụga onwe anyị n'ụlọ.
Amụtala ịme achịcha n'ụlọ, oge eruola ka anyị mezie mbara ihu anyị ka ọ bụrụ ogige! Mgbe ịchụso a, nke dị mma maka akparamaagwa, na-ewetara gị mkpụrụ ya, ụwa ga-abụ nke gị.
Na-akụ ma na-eto kukumba n'ụlọ ne gerekir?
Kedu ka esi enweta mkpụrụ kukumba?
Ọ bụrụ na ịnweghị mkpụrụ, belata salad zuru oke (edo edo) na ọkara. Were mkpụrụ osisi ahụ gbanye ha n'ime iko mmiri maka ụbọchị 1-2.
Mgbe ahụ were mkpụrụ ndị a na membranes a na-atọghe na ihe nchacha ma were aka gị / ngaji / mmiri kpochaa ha kpamkpam.
Tinye nkpuru ahihia ha kpamkpam n’ime iko mmiri 1. Hụ ndị nke ga-emikpu na ala mgbe ụbọchị 1 gachara. Mkpụrụ ahụ nke biri na ala ga-abụ nke kachasị arụpụta n'etiti ha.
Were mkpụrụ, gbasasịa ha na akwa nhicha ma kpoo ikuku dị jụụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa mkpụrụ ahụ mgbe ha kpọnwụchara nke ọma, ịnwere ike itinye ha sọks nke ụmụ nwanyị ma debe ha na gburugburu ebe mmiri na-adịghị. Tinye ala n'ime ite buru ibu (ma ọ dịkarịa ala 30 cm elu). Can nwere ike ịjikọta fatịlaịza gị (akwara akwụkwọ nri / shells shell / fatịlaịza emere) n'ime ala.
Mgbe ihu igwe dị ọkụ, anyị nwere ike ịtụte mkpụrụ gị ugbu a. Mee olulu miri emi n'etiti ala. Debe mkpụrụ ndị ahụ ma jiri nwayọọ kpuchie ha na ala ọzọ.
Nye ala mmiri mmiri (ala a ga-agba mmiri niile). Debe ya na anyanwụ ma na-agba ya mmiri kwa ụbọchị.
Mgbe osisi kukumba gafere 20-25 cm, wedata osisi ndị dị na ala otu. Ghaa ndi ozo na ite ndi ozo. N'oge oge uto a, osisi anyị kwesịrị ịhụ ma ọ dịkarịa ala awa 8.
Chedo ya site na ụmụ ahụhụ, nye fatịlaịza n'etiti, na mgbe kukumba dị njikere, belata mgbatị ahụ karịa 1,5 cm.
Na-akụ ma na-akụ tomato n'ụlọ ne gerekir?
Kedu ka esi enweta mkpụrụ nke tomato?
Ọ bụrụ na ịnweghị mkpụrụ, belata tomato chara acha nke ọma na ọkara wụsa mkpụrụ na mmiri n’ime iko. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta mkpụrụ sitere na sapling a kụrụ tupu; Họrọ tomato dịkarịrị nso na azuokokoosisi na kacha mfri eke.
Kewapụ mkpụrụ si na ihe ọ juiceụ juiceụ tomato na strainer. Mezie mkpụrụ nke fọdụrụ n'ime nsogbu ahụ na mmiri pọmpụ ma wụsa ha ihe ọ juiceụ tomatoụ tomato.
Mgbe ụbọchị 2-3 gachara, oyi akwa ero ga-etolite na mmiri a. I nwere ike ichere ruo ụbọchị nke atọ ruo mgbe akwa a ga-ebuwanye ibu. Nke a na-akpọ gbaa ụka.
Mkpụrụ osisi a na-eto nke ọma dị njikere ịpụta nke iko na ụbọchị nke atọ. Mgbe ihichachara ihe mkpuchi ahụ site na iko ahụ, hichaa mkpụrụ ahụ ọzọ na strainer. Hichaa na mmiri pọmpụ ma kpoo na plastik na gburugburu ebe dị jụụ, nke nwere ndo.
Tinye ala ị gwakọtara na fatịlaịza n'ime nnukwu ite ma mee oghere n'akụkụ dị iche iche nke ala ahụ. Wụsa mkpụrụ ahụ, na-akpachara anya ka ị ghara ịmachi ha. Jiri nwayọ mechie oghere ndị ahụ ị jiri ala rụọ. O kwesiri ka etinye mkpụrụ 3-5 n'ime ite.
Nye ala mmiri mmiri (ala a ga-agba mmiri niile). Debe ya na anyanwụ ma gbanye ya mmiri kwa ụbọchị ọ bụla 4-5 ka ala ala kpọrọ nkụ. Germination ga-eme n'ime ụbọchị 6-7 na gburugburu ebe obibi.
Amaghi ma odi mkpa; Ọ bụrụ n’ịgbalị inwe ngalaba ọzọ dị n’etiti ukwu na ngalaba na-apụta mgbe ị na-etolite, ị ga-agbaji ya.
Sowgha na-eto eto na-ede ede n'ụlọ ne gerekir?
Kedu ka esi enweta mkpụrụ nke ose?
Ọ bụrụ na ịnweghị mkpụrụ, hapụ ose chara acha iji kpoo ya na anwụ. Mgbe ọ belata ma kpoo nke ọma, ịnwere ike iburu mkpụrụ ahụ n'ime. Nwere ike idebe ya ọtụtụ afọ na-enweghị ịzụta ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta mkpụrụ sitere na sapling a kụrụ tupu; hapụ ose dịkarịrị nso ma kachasị acha ka isi ihe na alaka. N'otu aka ahụ, buru mkpụrụ mgbe ha kpachara.
Tinye ala ị gwakọtara na fatịlaịza n’ime ite buru ibu. Malite ịgba spaced oghere dị na ala. Tinye mkpụrụ na oghere, 1. Jiri nwayọ kpuchie ya na ala. Nye mmiri mmiri n’ala. Hapụ ya n’ebe ikuku juru mgbe ọ na-ahụ anwụ ka anwụ na-acha otu ụbọchị (ma ọ bụ anwụ ụtụtụ ma ọ bụ etiti ehihie). A waterụla mmiri nke ukwuu ma ọ bụ mee ka mmiri ghara ị deụbiga ya ókè. (Mmiri ụbọchị ọ bụla)
Mgbe ụbọchị 30-35 gachara, ọ bụ oge iji dọpụta ala osisi seedlings nwayọ site na ala ma kụọ ha na ite ndị ọzọ. Mgbe ịmechara oghere n'ime ite ahụ na osisi ọkara, tinye mkpụrụ gị na-emebi emebi mgbọrọgwụ ya. Re-ekpuchi akụkụ mepere emepe na ala.
A na-enye mmiri mmiri na ala nke na-adabaghị na mkpụrụ ahụ, mgbe ahụ a gaghị enye mmiri maka izu 1.
Mgbe epupụta atụgharị edo edo
Esi kụrụ na-eto garlic na ụlọ ne gerekir?
Olee otú e si enweta mkpụrụ nke galik?
Will gaghị ekwenye n’ụzọ dị mfe ọ bụ osisi toro mgbe itinye ya n'ọrụ. Garlickọ galik adịghị arụ ọrụ n’ezie.
Kewapụ garlic ahụ na-emebibeghị n’ebe ị tụkwasịrị obi.
Debe ite okooko osisi buru ibu ma kuo ala n'ime ya. Can nwere ike ịjikọta fatịlaịza gị (akwara akwụkwọ nri / shells shell / fatịlaịza emere) n'ime ala.
Dichaa oghere na-adịghị anya n'ime ala ma tinye garlic cloves n'ime oghere ndị a. Jiri nwayọ kpuchie ala. Enwere ike ịhapụ isi galik, ọ dịghị mkpa.
Anyị dịkwa njikere ...… nwere ike iji akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke galik na nri gị. I nwekwara ike iwe ihe ubi galik mgbe akwụkwọ ndị a na-acha kpamkpam. Wayzọ osisi a toro eto ga-eju gị anya, nke na-agbanwe ụdị nlekọta ọ bụla. Naanị cheta na ị ga-etinye ala dịtụ mmiri.
Mgbe ọ malitere ifuru
Na-akụ ma na-eto eyịm ke ufọk ne gerekir?
Kedu ka esi enweta mkpụrụ nke eyịm?
Dị ka galik, eyịm nwere ike ito ngwa ngwa na ngwa ngwa. Bee ala nke ezigbo yabasị ị họọrọ ihe dị ka 2.5 cm elu. Hapụ iberibe ị bee n’elu ala dị larịị, akụkụ akụkụ ya na-eche ihu n’elu wee hapụ ya kpọrọ nkụ ruo ụbọchị 1.
Mgbe ụbọchị 1 gasịrị, tinye ya na efere nke nwere akụkụ dị na ala ma tinye mmiri zuru ezu iji mee ka mgbọrọgwụ dị na mmiri. Chere ruo mgbe mgbọrọgwụ na-ahụ anya ka o too nke ọma. Mgbe ahụ ị nwere ike ịga n'ihu ịkwa akwa.
Mgbe ị na-etinye yabasị anyị dị njikere n’ime ite anyị, egbula olulu miri emi. Ọ ga-ezu naanị ma ọ bụrụ na mgbọrọgwụ kpuchie ya na ala. Mmiri dị mma gburugburu. Eyịm chọrọ mmiri mgbe niile na ala mmiri. Mgbe obere oge gasịrị, yabasị nwere ike ịbanye n'ime ala n'onwe ya, ịkwesighi ịgbatị ya.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ka eyịm dị mma too, ị kwesịrị ị na-eji nri nitrogen bara ọgaranya zụọ ha otu ugboro n’izu. Itinye àkwá na ala ala ga-eme ka nri na-aga n'ihu na-aga n'ihu.
Mgbe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke yabasị malitere ịmalite okooko osisi, ị nwere ike ịnakọta ha ugbu a.
Maka ịgha mkpụrụ ma na-eto nduku n'ụlọ ne gerekir?
Kedu ka esi enweta mkpụrụ nduku?
Ọzọkwa, ihe dị oke mfe ma dịkwa oke ọsọ na-eto eto akwukwo nri! Naanị iberibe poteto ị zụtara tinye ya na ala. Nke ukwuu!
Nye mmiri mmiri na ala, ite gị kwesịrị ịdị obosara. Nwere ike dina akwa n'okpuru ala ka ọ bụrụ ihe na-edozi ahụ. Ọ ga-adị mma ma anyị nọrọ na ndò ruo mgbe ọ ga-epupụta. Mgbe ọ na-epulite, ị ga-akpọrọ ya laa anyanwụ. Bee poteto n'ime oge dị mkpirikpi ga-emecha onwe ha. Echefukwala idebe ala nke mmiri mmiri!
Na-akụ ma na-eto eto agwa n'ụlọ ne gerekir?
Kedu ka esi enweta mkpụrụ nke agwa ọhụrụ?
Ọ bụrụ na ịnweghị mkpụrụ, kpoo agwa dị mma ị họọrọ n’anwụ. Mgbe agwa ndị ahụ na-acha edo edo na-achaghị acha, wepụ mkpụrụ ma tinye ha na efere mmiri. Mgbe mgbọrọgwụ pụta, oge eruola itinye mkpụrụ ahụ n'ime nnukwu ite.
Mee oghere n'ime ala ma tinye mkpụrụ. Nye mmiri mmiri n’ala. Echefukwala nri ala na nri dị n'etiti. I nwekwara ike ime fatịlaịza n'ụlọ site na mkpụrụ osisi mịrị amị / shells na shells egg.
A ga-enwe germination mgbe 6-10 ụbọchị. Mgbe epulite ghọrọ seedlings, ọ dị mkpa iji kụọ ha iche iche na nnukwu ite / ala. Ekwesiri itinye ya n ’uzo ọ dighi n’okpuru ma ọ bụ n’elu ala ahụ n’ụdị ala ya nke anyị na-ewere n’ite nke ọzọ. Ọ ga-etolite nke ọma na ihu igwe ọkụ. Dika alaka nke nkpuru osisi toro ogologo, ị nwere ike idozi ha n'otu ebe site na enyemaka nke eriri. Ọ kwesịrị idebe ala ubé ooh.
cherry & Utoojoo udara
Na-akụ ma na-eto cherị n'ụlọ ne gerekir?
Kedu ka esi enweta mkpụrụ nke cherị?
Ọ bụrụ na ịnweghị mkpụrụ, họta cherị ole na ole ị gaghị ezuru ma were mkpụrụ ha. Kpoo mkpụrụ ị zụtara n’anwụ ma ọ bụ na ndò ruo ụbọchị ise.
Jiri nwayọ belata akụkụ dị nkọ nke peepe na-acha ọcha n'èzí mkpụrụ osisi mịrị amị na mma. Iwepu mkpokoro ocha a gha azoputa gi izu abuo.
Mkpụrụ gị dị njikere! Ugbu a gbasaa mkpụrụ gị homogeneously ke akwa nhicha. Debe akwa nhicha nwere mkpụrụ gị na akpa rọba ma ọ bụ akpa plastik. Mmiri akwa nhicha ahụ nke ọma ma mechie akpa / akpa ka ikuku dị n'ime. Hapụ usoro a n’ebe dịtụ ọkụ ka mmiri wee gbakọta wee gbanye mkpụrụ ahụ ọzọ.
Mgbe izu 1 nke osisi ga-epu ome. Oge erugo ịkụ ha n’obere ite. Echefukwala inye mmiri mmiri na ala. Dịka ala kpọrọ nkụ, mee ya mmiri (2-3 ugboro n'izu) ma tinye ite ahụ n'ebe anwụ na-acha.
Ozugbo puo na-atụgharị ghọọ seedling, jide n'aka na ị ga-ebugharị ya na nnukwu ibu / ala. Echefukwala ifatilaiza ala gị. Nwere ike iji otu ụzọ ahụ mee cherị.
Na-akụ ma na-eto strawberries n'ụlọ ne gerekir?
Olee otu esi enweta mkpụrụ osisi strawberry?
Ọ bụrụ na ịnweghị mkpụrụ, họta otu strawberries ị nweghị ike ịkọ. Kewapụ ya na mma na efere mmiri ka ọ ghara imebi mkpụrụ. Were ma tụfuo mkpụrụ ndị na-eto n'elu mmiri. Kewaputa nkpuru osisi ndia site na mmiri ya na ihe ojoo ma kpoo ha.
Tinye ala gwakọtara na fatịlaịza n'ime obere efere. Debe mkpụrụ ndị a mịrị amị n'otu n'otu na akụkụ dị iche iche nke ala. Ọ ga-adị mma karịa ma ọ bụrụ na ị gbaa ya mmiri n'okpuru ebe a n'ihi na mkpụrụ ya pere mpe ma nke a nwere ike gbagọọ ụdị ị na-efesa. Inwere ike ijuputa nnukwu efere na mmiri ma tinye ite gị n’ime efere ahụ. N'ihi ya, ọ ga-adọta mmiri na oghere ala. Ma ebe ọ bụ na ala a ga-abụ mmiri nke ndụ, ọ ga-enwerịrị mmiri ahụ kpamkpam. Wesaa ala ọzọ n’elu mkpụrụ ya.
Tinye ntanye n'elu ite wee chere ka ọ puo na ndò, gburugburu ebe dị jụụ. O gha aghaghi imetu anyanwu aka. Mgbe ọ malitere ịmalite, wepụ mgbatị ahụ ma mee ka ala ahụ dị mmiri mmiri n'oge niile.
Mgbe ihe anyị na-epulite ghọrọ ihe ọkụkụ, anyị nwere ike ịkụ ha n’ ite dị iche iche.
Sowgha na-eto eto blakberị n'ụlọ ne gerekir?
Olee otu esi enweta mkpụrụ nke blackberry?
Ọ bụrụ na ịnweghị mkpụrụ, họta blackberry n’etiti ndị ị na-enweghị ike ị nweta. N’ime efere mmiri, jiri aka gị gwerie mkpụrụ ahụ ka ọ ghara imebi mkpụrụ ndị ahụ. Were ma tụfuo mkpụrụ ndị na-eto n'elu mmiri. Kewaputa nkpuru osisi ndia site na mmiri ya na ihe ojoo ma kpoo ha. You nwere ike ịchekwa mkpụrụ n'ime ngwa nju oyi ruo afọ 1 site na itinye ha na akwa nhicha ma tinye ha. Nwere ike ị nweta mkpụrụ ndụ kacha mma karịa ka mkpụrụ osisi ga-ezu ike n'oge usoro a.
Tinye ala gwakọtara na fatịlaịza n'ime obere efere. Wụsa mkpụrụ otu na otu n'akụkụ dị iche iche nke ala. Ọ ga-aka mma ma ọ bụrụ na ị gbaa ya mmiri site n’okpuru n’ihi na mkpụrụ ya pere mpe ma nke a nwere ike gbagọọ ụdị ị na-efesa. Inwere ike ijuputa nnukwu efere na mmiri ma tinye ite gị n’ime efere ahụ. N'ihi ya, ọ ga-adọta mmiri na oghere ala. Ma ebe ọ bụ na ala a ga-abụ mmiri nke ndụ, ọ ga-enwerịrị mmiri ahụ kpamkpam. Nwere ike fesaa ụfọdụ ala ọzọ na mkpụrụ. Gha mkpụrụ n’etiti Machị na Mee ga-enye nsonaazụ kacha mma.
Zụta seedlings mere
Trainzụ na obere oge
N'ihi na-eto eto mkpụrụ osisi / akwukwo nri seedlings ke ufọk ne gerekir?
Kedu otu na mkpụrụ / akwukwo nri nke a ga-etinye na mkpuru osisi?
Site na ịzụta ihe ọkụkụ dị njikere, ị nwere ike ilekọta ha site na ịgbara mmiri ma lekọta aro ndị dị n'elu. Yabụ, ị ga - ahụ ihe ga - egbo mkpa gị n’oge dị mkpirikpi karịa mgbe ị nọ iche.